Kedu ihe ị maara banyere SEO maka saịtị ọhụrụ?
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ banyere SEO ziri ezi maka saịtị akụkọ, dị ka ibe weebụ dị mkpa chọrọ okporo ụzọ ka ukwuu maka ọbụna karịa. Ihe niile nwere ike ịdị nnọọ mfe, dị ka site n'enyemaka nke Nyocha Search Engine nke ọ bụla ozi akụkọ ọ bụla nwere ike itinye maka ụzọ a bara uru nke na-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ ma gbanwee ha n'ime ndị na-amụbawanye ndị na-agụ akwụkwọ. N'ụzọ ahụ, a dụrụ gị ọdụ ka ị bipụta ọdịnaya ọhụrụ na nso nso a. Akwụkwọ odide gị kwesịrị ịbụ ihe ọmụma na mgbe niile dị iche iche, nke dị nso niile SEO maka saịtị mgbasa ozi kacha mkpa. Ma gbalịa ka ị ghara itinye maka ọkpụkpọ ojii ọ bụla, nakwa ka ị ghara igbochi akụkụ Akwụkwọ Nsọ gị ka ọ bụrụ na ị ga-ejikọta ya na isiokwu ndị dị na ya, jikọta spamming, duplicated content and so on.
N'okpuru ebe a bụ ọtụtụ ndụmọdụ bara uru, site na echiche nke SEO maka saịtị akụkọ. A nwara ọtụtụ n'ime ha ma mee ihe-gosiputara mgbe m nwere ahụmahụ a na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ:
Mee maka nchịkọta ọdịnaya, dị ka search engine algorithms na-enwe ekele maka ọdịnaya dị elu na ọkwa dị elu na SERPs. Ya mere, nwee ọdịnaya ojuju, zuru oke, mkpa, na mgbe ọ bụla dị ọhụrụ, kwadoro ya na nnukwu isiokwu ọ na-akọwa ọdịnaya ọwa weebụ ọ bụla kacha mma. Enweghi ike ịnye isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu dị iche iche na ederede ahụ, na ederede isiokwu aha. N'ụzọ dị otú a, rịba ama, ka ịchekwaa njupụta okwu okwu ziri ezi n'ime ihe dị ka pasent 2 nke ihe odide ederede niile. Maka ozi ọzọ, ị nwere ike ile anya site na ntuziaka ndị Google
Na-eme SEO maka saịtị akụkọ, ị kwesịrị ị na-elebara anya kachasị mma URL mgbe ị na-ekepụta ọ bụla ma ọ bụ post. Na - enyocha mgbe niile iji tinye Keywords ma ọ bụ keyphrases na URL ọ bụla i mepụtara, mgbe imelite ndị dị adị nwere ike ịbụ ezigbo echiche - bara uru maka ndị na - agụ akwụkwọ gị, ma dị mma maka nsị ndị nyocha ahụ n'otu oge. Ọzọkwa, ịtụle SEO maka saịtị akụkọ, a dụrụ gị ọdụ itinye akwụkwọ URL gị ọ bụla na nọmba pụrụ iche karịa atọ atọ n'ogologo ya.
Na ebe a na - abịa nanị akara ntaneti meta kachasị mkpa maka SEO maka saịtị mgbasa ozi, n'ihi ya, ị ga - atụle ihe ndị a mgbe ịtinye ha:
Nke mbụ, ihe mkpado meta dị ka news_keywords ga-enyere onye mbipụta ahụ aka (ịhapụ ịkọwa ma kenye oke data), yana ndị na-agụ akwụkwọ n'ezie (na-eme ka ọ dị mfe ịlele azụ ma ọ bụ kesaa ozi, dịka ọmụmaatụ , site na profaịlụ njikọ njikọta)
Cheta, nanị akara edemede e nyere na URL na mkpado mkpado bụ commas. Jiri ha naanị ka ị kewaa isiokwu na ahịrịokwu okwu.
Ihe ka ọtụtụ n'ime isiokwu ndị a nwere ike iburu otu uru ahụ, m na-ekwu mgbe ị na-ezo aka SEO maka saịtị akụkọ
Otu n'ime atụmatụ ndị kacha baa uru ebe a bụ nhọrọ iji rụọ ọrụ 10 Keywords dika okwu, e. g. , iji mepụta mkpado ọhụrụ maka edemede ọhụrụ gị bipụtara. Ime otú ahụ, ị ​​ga-enwe ọnụọgụ abụọ na-agafe: ọ bụrụ na ọ bụrụ na otu isiokwu na-abaghị uru n'isiokwu ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịme ya ngwa ngwa maka ihe nkwụsịtụ ozugbo Source .